Ukunyusa ukuYilwa kwe-imeyile ukuFumana ukuThathela ingqalelo uMfundi wakho | Martech Zone
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwinkomfa, ndibukele umboniso onomdla kumanyathelo athathwa ngumfundi we-imeyile njengoko bengena kwi-imeyile yabo. Ayisiyondlela abantu abaninzi abakholelwa kuyo kwaye isebenza ngokwahlukileyo kwiwebhusayithi. Xa ujonga i-imeyile, ujonga amagama okuqala omgca wesifundo kwaye mhlawumbi imbonakalo emfutshane yomxholo oqulathiweyo. Ngamanye amaxesha, kulapho umrhumi ayeke khona. Okanye banokucofa kwi-imeyile kwaye bayivule- baveze icandelo eliphezulu le-imeyile elijongeka kumxhasi wabo we-imeyile. Kwaye emva koko, ukuba ingqalelo yabo ibanjiwe, banokuhambisa ezantsi. Abanye abathengi, kukho inyathelo eliphakathi lokuba banqwenela ukujonga imifanekiso okanye hayi - kodwa ndiyakholelwa ukuba indlela yokuziphatha iyahamba kancinci.
le infographic evela kuEmma uhamba ezinye zeenkcukacha eziphambili ze-imeyile ezithatha umfundi ukuba abe nomdla kwizinto ezinzulu. Ukuthabatha imvakalelo, usebenzisa abantu kwimifanekiso, ugxile kumbala nakwindawo emhlophe ukuqhuba iliso ekuboneni lisebenze… zonke ezi zinto zinokudityaniswa ukwenza nzulu ukuvula kunye nokucofa nombhalisi wakho.
Ndithanda ngokukhethekileyo intetho yabo yokuvala ngombala, nangona kunjalo, kwaye ndingayisebenzisa kuyo nganye yeemfihlo ezili-12!
Bonke abaphulaphuli bahlukile, ke ngoko kubalulekile ukuqhuba iimvavanyo ezimbalwa ukufumanisa…
Sizibonile iziphumo ezintle kunye nee-imeyile ezinekopi ende ezazingenayo imifanekiso emininzi, kunye nezinye ii-imeyile ezazingumfanekiso omnye omkhulu ohanjiswe ngekhonkco. Konke kuxhomekeke kubaphulaphuli bakho, inqanaba labo lokuqwalaselwa, ulindelo lwabo ekufumaneni i-imeyile yakho, kunye neliphi inqanaba lomjikelo womsebenzi abakuyo. Mhlawumbi banqwenela ukufunda inkcazo ende yeminikelo yakho, okanye bakulungele ukucofa iqhosha kunye nerejista. Ngeke uyazi ngaphandle kokuba uzama indibaniselwano eyahlukeneyo. Kwaye ungothusi ukuba ayisosisombululo sobukhulu obulodwa. Amaxesha amaninzi uyakufumana iziphumo ezingcono ngokwahlulahlula kunye nokuvavanya iiyantlukwano ezahlukeneyo kubabhalisi bakho.
tags: ingqaleloUyilo lwe-imeyilei-imeyile infographicEmmaIngqondo yomntuI-emma yammyemaPsychology
Fumana umxholo wakho upapashwe ngokukhawuleza ngezi Ngcebiso zoLawulo lweMifanekiso